ရွှေနိုင်ငံ: တောကဂွက်ထော်က လွင်ငြိမ်းချမ်းကျော်ကို ပြန်ရှင်းပြတာ
ဆက်ပြီးအသေးစိပ် မဆွေးနွေးခင် ဦးရဲ့ basic assumptions နဲ့ ခံယူချက်တချို့ကို ချပြထားချင်တယ်။
(၁) ဦးအမြင်အရ အမျိုးသားစိတ် ဟာ အဓိက လို့ခံယူတယ်။ Unabated Nationalist တယောက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ် ခံယူထားတယ်။
(၂) ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ဟာ အမျိုးသားရေးအောက်မှာပဲရှိတယ်။
(၃) ဘာသာရေးကလွဲလို့ absolute truth ဆိုတာမရှိ၊ ဒါကြောင့်အားလုံးဟာ Relative truth ပဲလို့ခံယူထားတယ်။
(၄) ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီတို့၊ Human Rights တို့ဆိုတာဟာ Principle အရလက်ခံပေမဲ့ ၊ implementation ကျတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ပကထိ အခြေအနေအတိုင်း ကျင့်သုံးရမယ်။ သူများနိုင်ငံက တည်ရှိမှုကို ဖြတ်ကြည့်ပြီး ပုံတူကူးချ လို့မရ
(၅) Fairness ဆိုတာလည်း relative ပဲ။ Absolute Fairness ဆိုတာ လက်တွေ့မှာ မရှိဖူး။ အားလုံးစာ Relative based တွေကြီးပဲ။
ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်၊ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာ ကိုတော့ အပျောက် မခံနိုင်ဖူး။ အထိမခံနိုင်ဖူး။
ဒါတွေပျောက်သွားရင် Identity ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ Identity ကစကြည့်ရအောင်။
Identity မကြည့်ခင်၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံလို Land of Immigrants လို့ပြောနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ လက်တစုပ်စာပဲရှိပါတယ်။ America, Australia, Canada, New Zealand တို့ဟာ လူခံ Native တွေကိုဖယ်ရှား တချို့ဆို သတ်ဖြတ်ပြီးမှ လူဖြူတွေက မတရားအနိုင်ကျင့်ယူထားကြပြီး သူများနိုင်ငံကို ကိုယ့်နိုင်ငံလုပ်ထားကြတာပါ။ အမေရိကန်တွေဟာ Native American တွေဖြစ်တဲ့ Red Indians တွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပြီးမှ အဖြူနိုင်ငံကို ထူထောင်ထားတာပါ။ အစက Immigrants တွေဟာ အဖြူတွေချည်းပါပဲ။ နောက် အမဲ တွေကို ကျွန်အဖြစ်ဖမ်းလာ Plantation တွေမှာ တရိစ္ဆန်တွေ လိုခိုင်း။ နောက်မှ Industrialization မှာလူလိုမှ တခြား Immigrants တွေကိုခေါ်ယူပြီးမှ၊ Multicultursim ပေါ်လာမှ Land of Immigrants ဆိုပြီးကြွေးကြော်နေကြတာပါ။ Australians တွေ Tasmania မှာ Full-Blooded Aborigines, Australians Native တွေကို သတ်ပစ်တာကြားဖူးမှာပါ။ Australians တွေကတော့ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ အခုတံခါးပိတ်ဝါဒ ကျင့်သုံးနေလေရဲ့။
တူမောင်က ၂၁ရာစုမှာရောက်လာလို့ What makes American (an American) ? ဆိုပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လာပြီး အသံကောင်းဟစ်နိုင်တာပါ။ ၁၉ရာစု၊၂၀ရာစု ခေတ် အစ မှာသာ တရုတ်တယောက်အနေနဲ့ အမေရိကား ကိုရောက် လာပါလား မန်ချုးကြက်ဆံမှီး ကျစ်ပြီး California မှာပေါက်တူးကိုင်ပြီး မီးရထားလမ်းဖေါက်နေရမှာပါ။ တရုတ်တွေကို ကျွန်လိုခိုင်း ဖို့ခေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ မမေ့လိုက်နဲ့နော်။ Western အမေရိကား က မီးရထား လမ်းတွေဟာ Chinese labor ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဖြူအချင်းချင်းတောင် နောက်မှရောက်လာတဲ့ Italians တွေ Polish တွေအကုန် အနှိမ်ခံကြရပါတယ်။ ပိုးလစ်တွေကို ငထိုင်း တွေဆိုပြီး နှိမ်လိုက်သေးတယ်။ မကြာသေးခင် အချိန်အထိ အဖြူမှာမှ
WASP – White Anglo Saxon Protestant တွေမှ အမေရိကားမှာ လူထင်တာပါ။ အခုလူချမ်းသာ မိသားစု (1%) အများဟာလည်း ဒီ WASP တွေပါပဲ။ 1960s Martin Luther King တို့ Civil Rights Movement ပြီးမှ colored-people တွေကို လက်ခံလာကြတာပါ။ ဒီတော့မှ အာရှတွေလည်း ရောနှောပြီး အသက်ရှူချောင်လာတာပါ။
တူမောင်က ပလို့ဂျိ ဆို ပြီး စာအုပ်ကလေးကိုင်ပြီးကောလိပ်ဂျင် ကြီးဖြစ်သွားတော့ အရင့်အရင် နောင်တော်ကြီးတွေလို အိုမိုင်ဂေါ့ ငါနိဗ္ဗန်ရောက်သွားတယ်ထင်ချင်ထင်နေမှာ။ Green Card နဲ့လာရင် တောင်၊ အမေရိကားမှာ (၅) နှစ် မနေရသေးရင် Naturalized citizen မဖြစ်နိုင်သေးဖူး။ ငါ citizen ဖြစ်ရင်ဆိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်ချင်ယဉ်နေမှာ။ အေးလေ အသေခံပြီးတိုက်ပွဲ ၀င်ပေးသွားတဲ့ civil rights သူရဲကောင်းတွေကြောင့် ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးရနေတယ်မှတ်ပါ။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွေ ၊ ၁၉၆၀ အစခုနှစ်တွေကများ တူမောင်အမေရိကား ရောက်လာခဲ့ရင် ၀တ်ဖြူဆင်ကျယ်နဲ့ KKK Ku Klux Klan ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးတွေရဲ့ မီးပုံပွဲမှာ ပညာအပေးခံချင်ရင်ခံနေရမှာ။ အမဲမဟုတ်တော့ လည်ပင်းကြိုးဂွင်း အစွပ်မခံရတာကိုပဲ ကျေးဇုးတင်နေရဦးမှာ။
၁၉၈၀ခုနှစ်တွေက တောင် ဂျပန်တွေက စီးပွားရေး သိပ်တက်လာပြီး Detriot မှာ ကားကုမ္ပဏီတွေက အလုပ်ဖြုတ်ကြတော့ တရုတ်တယေက်၊ ဂျပန်ထင်ပြီး အသတ်ခံရ ဖူးတယ်။
9/11 ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမှာ ဗေါင်းထုပ် နဲ့ ဆင်း (Singh) ကုလား ကို Texas မှာ မွက်စလင် ထင်ပြီး စိတ်နာနာနဲ ပစ်သတ် လိုက်တယ်။
ဒါကြောင့် Relative Truth လို့ပြောတာပါ။ အခြေနဲ့ အချိန်အခါ အပေါ်မူုတည်တယ်လေ။
တူမောင်ရောက်နေတဲ့ Cedar Rapids က နဲနဲတောကျတယ်။ Red Necks တွေများတယ်။ လူတိုင်းလိုလိုမှာလည်း သေနပ်ရှိတယ်။ တရုတ်ပြည်ကြီးချမ်းသာနေပြီး အမေရိကန်တွေ ဒုက္ခတွေ့နေတော့ တရုတ်မြင်ရင် ခပ်ချင်ချင်နဲ့ ပစ်သတ်သွားဦးမယ်။ ဦးအကိုက သူ PhD မလုပ်ခင် ၁၉၈၄ လောက်မှာ U of I (Warerloo) မှာစာသင်တယ်။ ဦးက Quad City နားက Illinois မှာ Sr Engineer အလုပ်တန်းရတယ်။ ဒါကြောင့် သေခြာကြည့်ရင် ဦးတို့ခြေရာတွေ တွေ့ရင်တွေ့နိုင်မှာပါ။
အခုမှ မှ Multiculturism ဆိုပြီး ကြွေးကျော်လာလို့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အနေနဲ့ပို အ၀င်ဆံ့ လာသလို Naturalized Citizen တွေကလည်း ငါအမေရိကန်ကွ လို့ကုန်းအော်လာနိုင်တာပါ။ ခုတော့ refugee တွေအနေ နဲ့လာလိုက်ကြတာ ဆင်ပေါင်ဝဲရွာက အုန်းစိန်ရော သနပ်ပင်က ဂွက်ထော်ရော အမေရိကန် စီတင်ဇင်ကြီးတွေ ဖြစ်နေလေရဲ့။ တချိန်ထဲမှာ ဆိုမာလီက အဗ္ဗတူလတစ် တို့လည်း အမေရိကန်စီတင်ဇင်ကြီးတွေ ဖြစ် ကုန်ကြပြီပေါ့။ မိမိဌါနေစီ ပြန်သွားကြပြီး သေနပ်ကိုင် ဘာသာရေး အကြမ်းဖက် နေတဲ့ အဗ္ဗတူလတစ် တွေလည်းရှိရဲ့။
အမေရိကားတို့လို Immigrants တွေနဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံ မဟုတ်ရင် နိုင်ငံတိုင်းမှာ Native လူမျိုးတွေရှိကြတယ်။ ဂျာမဏီမှာ ဂျာမန်လူမျိုးတွေရှိသလို၊ပြင်သစ်မှာ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေရှိတယ်လေ။ တရုတ်ပြည်ကြီးမှာလည်း ဟန်းတရုတ်တွေက လူများစုပဲမဟုတ်လား။ ဟော ဂျုးတွေနဲ့ ပါလက်စတင်းလူမျိုးတွေ နယ်မြေလုနေကြတာ၊ ခုထိမဖြေရှင်းနိုင်သေးဖူးမဟုတ်လား။ ဂျူးတွေကအရင်ရှိတယ်၊ နောက် ပါလက်စတင်းလူမျိုးတွေက ဂျူးတွေမောင်း အထုတ်ခံရတော့ ၀င်နေကြတယ်၊ ဂျူးတွေပြန်လာပြီး ပါလက်စတင်းလူမျိုးတွေကိုမောင်းထုတ်ပြန်တော့ ပြဿနာက မရှင်းနိုင်။ ဘယ်သူပိုင်လို့ ပြောမလဲ။
ထို့နည်းတူစွာပဲ၊ Kosovo ဟာတကယ်က Serbs တွေရဲ့နယ်မြေပဲ။ နောက်မှ Romanian တွေရောက်လာပြီးနေရာ ယူကြတာ။ ဟော…တောကြာနေတော့ Kosovo ကို အနောက်နိုင်ငံတွေက ၀ိုင်းထောက်ခံ လိုက်ကြတော့ အခု Kosovo မှာ Serbs တွေက လူနဲစုဖြစ်သွားပြီ။ ဘာသာလည်းမတူကြဖူး။ Serbs တွေက ခရိယန်ဘာသာဝင်တွေ။ Romanian တွေက မွတ်စလင်တွေ။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းမှာ Native နဲ့ Non Native ဆိုတာရှိတယ်။
လူမျိူးရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင် တချက်ကလေး သည်းညည်းခံလိုက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ အားနာလိုက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ Kosovo မှာလို အဖယ်ခံရမှာပေါ့။
ထို့နည်းတူစွာပဲ တမီး (Tamil) တွေ သီရလင်္ကာမှာ ကျူးကျော်ရောက်လာပြီး ဟော…ကြာတော့ပြည်နယ်တောင်းမယ်။ မရရင်လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းကြမယ်။ အများအားဖြင့် ပြီးရင်နောက်တဆင့် အနှိမ်ခံရပါတယ်ဆိုပြီး ဖင်ပြဲအောင်အော် ပြီးရင်လွက်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတောင်းကြလိမ့်မယ်။
အမေရိကန်နဲ့ အနောက်အုပ်စုဆိုတဲ့ ကိုလိုနီသမားဟောင်း တွေက သူများနိုင်ငံဆိုရင် Kosovo လို လွပ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်တည်တောင်းချင်ရင် ၀ိုင်းထောက်ခံကြပါလိမ့်မယ်။ အဲအမေရိကန်တွေဟာ တောင်ပိုင်း ကခွဲထွက်မယ်ဆိုတော့ ပြည်ထွင်းစစ် တောင် ဆင်နွှဲလိုက်ကြသေးတယ်။ Wyoming တို့လို States တွေမှာ လူဦးရည် သိန်းဂဏန်းပဲရှိတယ်။ Congress မှာ အမတ်မင်း (၂)ယောက် (၃)ယောက် စီပဲရှိ ကြတယ်။ နဂိုရ် မူလပိုင်ရှင် Red Indians တွေကို Indians Nation ထောင်ပေးပါလား။ နိုးနိုးနိုးပဲ။ စပိန်မှာ Basque, Galician နဲ့ Catalan ခွဲထွက်ရေးအုပ်စုတွေရှိတယ်။ ဒါတွေကိုအကုန် အစိုးရကနှိမ်နင်း ပြစ်တာပဲ။ IRA ကိုလည်း အင်္ဂလိပ် တွေက သတ်ပြစ်တာပဲမဟုတ်လား။ ဟော သူတို့ ထောက်ခံတဲ့ Georgia က South Ossetia နဲ့ Abkhazia ပြည်နယ်တွေက ရုရှားတွေက ခွဲထွက် မယ် ဆိုတော့ အို ဆန့်ကျင်လိုက်ကြတာ။ မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားတွေကို လာပြီး ပညာပေးကြတိုင်း ခွဲထွက်ဖို့မြှောက်ပေးကြတာ ဒင်းတို့ပဲ။ ရွှေဗမာ ဒေါ်လာစားတွေက ငွေမျက်နှာနဲ့ ဘာမှမကန့်ကွက် ရဲကြဖူး။ အမျိုးသားစိတ်နဲ့ကြည့်ရင် စိတ်နာစရာ။
Rohingya ဆိုတာက Non Native။ ကျုးကျော်သူ။ ရခိုင်တွေက Native။ ဒါကို ထင်ထင်ရှာရှား သိဖို့လိုတယ်။
တချက်ကလေး သတိလွပ်လိုက်ရင်၊ နောင်တချိန်မှာ ရခိုင်တွေကို မောင်းထုတ်ပြီး လွပ်လပ်ရေးတောင်းမှာပဲ။
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော်မှာ ဖြစ်တာသာကြည့်။
ဥါဏ်ကြီးရှင် ပညာတတ်ဆိုသူတွေက တကယ် ဥါဏ်မရှိလို့၊ သို့မဟုတ် အက်တစ်ဗစ် ဆိုပြီးဘ၀င်မြင့်နေကြလို့ အန္တရယ်ကို မမြင်ကြလို့ ပါ။ အမျိုးသား တာဝန်မသိတာ ပါပါတယ်။ ဒေါ်လာအရှင် အဖြူသခင်တွေကြေနပ်အောင်၊ အဖြူတွေအကြိုက်၊ ဖင်ရက်ဆားဖြူး ကြွေးကျော်ပြနေကြတာပါ။ မန္တလေးသားပါတဲ့ အရှက်မရှိ Long Live Rohingyar လို့အော်ရဲသေးတယ်။ ဗမာတွေ ထီးနန်းဆိုက်ခဲ့တဲ့ ဒို့မန္တလာပြည်လည်း တရုတ်မြို့တော်ဖြစ်နေပြီ။ ဟော ဒေါ်လာမျက်နှာနဲ့ ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို ဘင်္ကာလီကုလားတွေ ပင့်ဖိတ်လာပြန်ပြီ။ နိုင်ငံရေးနားမလည်ပဲ မလယ်ရှုပ် ၀င်လုပ်လို့ ထောက်လှမ်းရေးတွေက ကောင်းကောင်း ပညာပေးလိုက်တာ ဟိုပင် ဒီပင်ကူးတဲ့ မျောက်ကြီးဖင်ခေါင်းကျယ် ဖြစ်ပြီးပြီ၊ မမှတ်သေးဖူး။ ဘင်္ကာလီကုလားတွေ ဘန်ဘူးပေးမှ အဘား၊ အဘား အော်နေရမယ်။
ရှင်းရှင်းမြင်ရမှာက Rohingyar ဆိုတာ Foreigner ။ မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်။
သူတို့ကိုယ်တိုင်က အာရပ်တွေသင်္ဘောပျက်ပြီး ရောက်လာတာတာပါဆိုရင် အာရပ်တွေစီပြန်ပို့လိုက်ပေါ့
DNA အရ ဘင်္ကာလီကုလားတွေဆိုရင်လည်း သူတို့နိုင်ငံကိုပြန် ကန်ထုတ်လိုက်ပေါ့။
ဒီနေရာမှာ စစ်အစိုးရရယ်၊ အာဏါရှင်ရယ်၊ ဒီမိုကရက်ရယ်၊ အတိုက်ခံရယ် မရှိဖူး
Native နဲ့ Non Native – Foreigner ပဲရှိတယ်။
Rohingyar ပြဿနာကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လည်း ရှင်း ရမှာပဲ။ အခုလည်းရှင်းရမှာပဲ။
ဒါ နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တယ်။ တမျိုးသားလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်။
ကောင်းပြီး ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ဟာ Racists တွေလို့ မစွပ်စွဲ နိုင်ဖူးလား။
WHY? Because, we all are Racists to some extent.
Every country has Racism to some extent.
It differs only on the level of subtleness.
Worse, people like to pretend instead of admitting Rascism.
တူမောင် အမေရိကားမှာ ကြာကြာနေပြီး လူလုပ်ကြည့်ပါဦး။ မယုံမရှိနဲ့ Racism ရှိကိုရှိတယ်။
တချို့နေရာမှာ ဗြောင်မကျ တာပဲရှိတယ်။
ဥရောပမှာရော၊ ရှိပါသဗျာ။ အဖြူ မှနေရာရတာ
ဂျပန်က သူ့လူမျိုးမှ လူထင်တာ။
လူတွေက MultiCulturism ကို (ငပေါတွေသာ နားမလည်လုိ့) အဟုတ်ထင်နေကြတာ။ ကျန်တဲ့သူတွေက ပြောလို့ကောင်းအောင် သာ ဟန်ဆောင်အော်နေကြတာပါ။ ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ် (Merkel) မာကာလ် က MultiCulturism does not work ဆိုပြီးထုတ်ပြောရပြီ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း Farang (နိုင်ငံခြားသား) က မွေးတဲ့ ခလေးဟာ အမေရိကန်မှာလို အော်တိုမစ်တစ် ထိုင်း နိုင်ငံသားမဖြစ်ဖူး။ Farang ဟာ Farang ပဲ။
ထိုင်းမ တွေယူထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ နှစ်တိုင်းဗီဇာ ပြန်လျှောက်ပဲ။
Citizenship ကို အဓိက က (နေရာတိုင်းးမဟုတ်) Bloodline နဲ့ပဲခွဲတာပဲ။
နောက် SE Asia နိုင်ငံ အများစု မှာ Naturalization ဆိုတာ ရှိလို့လား။
တူမောင်က အမေရိကန်ရောက်ပြီး naturalized citizen တွေကိုမြင်ပြီး အတွေးကြောင်သွားတာပါ။ အမေရိကားမှာတောင် တိုင်းပြည်မှာမွေးတိုင်း အောတိုမစ်တစ် citizenship ရတာဟာမှန်ရဲ့လားလို့ ဆွေးနွေးတင်ပြလာသူတွေရှိနေပြီ။ Mexico ကနေ မွေးခါနီးမှ America မှာလာမွေးကြတာ များလာလို့လေ။
တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင် ယနေ့ခေတ် Immigrants ဆိုတာ လူများစု ဖြစ်လာတော့ reverse colonization လာဖြစ်တာပဲ။ အင်္ဂလိပ်တွေ သူတို့ရဲ့ ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေကို နိုင်ငံခြားသား ကုလား အလုပ်သမားတွေ သယ်လာပြီး ဗမာ၊မလေး နဲ့ ဖီဂျီ တို့မှာ ပြဿနာ ပေးခဲ့တဲ့ ဒုက္ခ အင်္ဂလိပ်တွေ ၀ဋ်လည်နေရပြီ။ London မြို့လယ်ကို သွားကြည့် ကုလားပြည်ရောက်သွားသလိုပဲ။ မွတ်စလင် တွေလှိမ့်ဝင်လာတာ။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ အထောက်အပံ့ နဲ့ အသက်ရှင်နေကြပြီး အဖြူတွေကို လည်လှီးဖို့ ပလီတွေမှာ တရားဟောနေကြလေရဲ့။ ငကြင်းဆီနဲ့ ငကြင်းကျော်နေကြတာလေ။ အဲ လစ်ဖရယ်တွေ အရူးထပြီး EU Human Rights ဥပဒေတွေအရ ဒီဘာသာရေးအကြမ်းဖက်သမားတွေကို Deport လုပ်လို့ အလွယ်ဖူး။ ဥရောပ က ကိုလိုနီ အဖြူတွေ မကြာခင် အာလာ အာလာ အော်ရတော့မယ်။ ဒါကြောင့် Austria လိုနိုင်ငံတွေမှာ nationalist ပါတီတွေခေတ်စားလာတာပေါ့။ English Defense League ဆိုတာတွေပေါ်လာပြီ။
အမေရိကန် နိုင်ငံဟာ Florida ကို Spain စီက ဗိုလ်ကျ လုယူခဲ့တာ။ California ၊ New Mexico တို့ကိုလည်း Mexico စီက ဗိုလ်ကျပြီး သိမ်းယူခဲ့တာ။ အခု Illegal Immigrants တွေသန်းနဲ့ချီရှိလာတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက Hispanic မဲကို ကြည့်ပြီးမကိုင်ရဲကြဖူး။ အဖြူတွေရဲ့ ခလေးမွေးနှုံးကကျ။ Hispanic တွေက တဖြွပ်ဖြွပ်မွေး။ မကြာခင် လူဦးရေအရ အမဲတွေကို ကျော်ပြီး အဖြူတွေကို မှီလာတော့မယ်။ Mexican Nationalist တချို့ က လူဦးရေ အသာရမှုနဲ့ နဲ့ ငါတို့ နယ်မြေတွေပြန် သိမ်းမယ်လို့ ဆွေးနွေးလာတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် က ဦး ရောက်ခါ (စ) က အမေရိကားနဲ့ လက်ရှိအမေရိကား ဟာတခြားစီပဲ။ နှစ် (၃၀) နီးပါးမှာ ပျက်စီးလာလိုက်တာ သံဝေဂ ရစရာ။ နောက်အနှစ်တရာဆို အမေရိကားဟာ Spanish Speaking နိုင်ငံဖြစ်သွားစရာရှိတယ်။
တူမောင်က အိုစာမား (Osama Bin Laden) သေတော့ အမဲတွေ လက်တီးနိုးတွေ America America အော်ပြီး အောင်ပွဲခံနေကြတာကို ပြောတယ်။ မှန်ပါတယ် အမေရိကားဟာ Immigrants တွေနဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ကိုး
၂၀၀၈ တုန်းက အိုလင်းပစ် အားကစားပွဲတော် တရုတ်ပြည် ဗေဂျင်း မှာလုပ်တယ်။ အိုလင်းပစ် အလံ သယ်ယူပွဲ အစမှာ တီးဗက်တွေနဲ့ အဖြူအက်တစ်ဗစ် တွေကဆန္ဒပြကြတယ်။ မကြာဖူး အမြို့မြိူ့ရောက် တိုင်း တရုတ်ကျောင်းသားတွေရော၊ အဝေးရောက်တရုတ်တွေ ထွက်လာပြီး Show of support ထန်ပြန် တရုတ်အလံတွေထောင်ပြီး ၀ိုင်းအောဟစ် ဆန္ဒပြကြတယ်။ နိုင်ငံခြားသား မျက်ခွက်တယောက်မှ မတွေ့ရပါလား။
ဘာကြောင့်လဲ။ တရုတ်ပြည်ဆိုတာ တရုတ်တွေရဲ့နိုင်ငံလေ။ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးရှိခဲ့ကြတာ။ အမေရိကန်တွေက နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကျော်ပဲရှိတာ။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ကုလားပြည်မှာ ကုလားတွေပဲလေ။ ကုလားမျိုးစုံတွေ့ရမယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ ကိုလက်ခံပြီးဖွဲ့ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှ မဟုတ်တာ။ ဂျပန်ပြည် ကတော့ ဂျပန်မဟုတ်ရင် ၊ ဂျပန်မှာ မွေးတဲ့ ကိုရီးယားတွေတောင် ဂျပန်လို့ အသိအမှတ် မပြုဖူး။ ရောက်နေတဲ့အီရန် နဲ့ ဘင်္ကာလီကုလားတွေ အစောကြီး စီးပွားရေးကျတာကို အကြောင်းပြပြီး မောင်းထုတ်လိုက်ပြီ။ မြန်မာတွေတောင် ဒေါ်စုမျက်နှာ နဲ့ အသက်ရှင်နိုင်နေတာ။ ပြန်ကြတာလည်းမနဲပါ။
ကမ္ဘာမှာ အမေရိကန်လို နိုင်ငံကများသလား၊ တရုတ်လိုနိုင်ငံက များသလား ရေကြည့်လိုက်ပါ။
တူမောင်တို့လို တရုတ်နွယ် တွေကို မော်စီတုံး လက်ထက်ကတည်းက Overseas Chinese လို့သတ်မှတ်တယ်။ ၀န်ကြီးချုပ် ချော်အင်လိုင်းကိုယ် တိုင် သိပ်အားထားတယ်။ တချို့ကလည်း Burmese born Chinese လို့သတ်မှတ်သူတွေရှိပါတယ်။ သွေးရော သွားတော့ သတ်ဆင် (Thatsin) တို့လို ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသူတွေရှိသလို ဦးနေ၀င်း ကိုယ်နှိုက်လည်း တရုတ်သွေးပါတာပဲ။ ဒေါက်တာညီညီ ကိုဖြုတ်ချင် တော့မှ တရုတ်သွေးပါတယ်ဆိုပြီး ဖြုတ်ပစ်တာလေ။
ဗမာပြည်မှာမွေးပြီး နိုင်ငံခြားသွေးပါသူတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ သွေးရောတာမဆန်းပါဖူး။ ဘာပြဿနာမှ ရှိစရာမရှိပါ။
ဦးရဲ့ အရင်အနှီးဆုံးမ်ိတ်ဆွေ တယောက်၊ နယူးရောက်မြို့က သွားဆရာဝန်ဟာ တရုတ်အစစ်။ သွေးမရောဖူး။ ဒါပေမဲ့ ဗမာပြည်မှာမွေးတာ။ ဗမာပြည်ကို ချစ်တာမေးခွန်းထုတ်စရာမရှိဖူး။ အဖေက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ အမေရိကန်တွေနဲ့ ပါလာတာ။ ဆရာဝန်စစ်ဗိုလ်။ ဒီလို လူမျိုးကို ဦးရဲ့စိတ်ထဲမှာ တရုတ်သွေးပါဦးတော့ တရုတ် သက်သက်လို့ဘယ်လိုမြင်နိုင်မှာလဲ။
ထို့နည်းတူစွာပဲ ဦး ၁၉၈၂ မှာ အမေရိကားရောက်ရောက်ချင်းဘွဲ့လွန်ကျောင်းတက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားတယောက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ညီအကိုလိုပဲခင်ပါတယ်။ စာသိပ်တော်တယ်။ ဦးမှတ်မိတာမှန်ရင် ၁၀တန်း အောင်တော့ မြန်မာနိုင်တခုလုံး ပထမရတယ်။ ဆေးကျောင်းကထွက်ပြီး အမေရိကားမှာကျောင်းလာတက်တယ်။ Microbiology မှာ PhD ရတယ်။ မောင်နှမတွေအားလုံး လူတော်တွေ။ ညီအငယ် ဆုံးကသူ့လို ပါရဂူ။ ညီအကို နှစ်ယောက်လုံး Lab ကိုယ်စီ researchers တွေ ကိုဦးစီးပြီး အောင်မြင်ကြတယ်။ နံမည်ကြီး Cornell မှာထင်တယ်။ ညီမ တယောက်က ဆရာဝန် Standford မှာ။ နောက်ညီမ က Computer field မှာ။ ဒီညီမရော သူရော အလုပ်ကခွင့်ယူပြီး သူတို့စရိတ်နဲ့သူတို့ ထိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကလူငယ်လေးတွေကို စာလာသင်ပေးတယ်။ အဖေက နှလုံးကု သမားတော်ကြီး။ ဦးနေ၀င်းတောင် ဆီးကပ်ရတယ်။ အမေက ဆေးကျောင်းက ပါမောက္ခ။ ဦးရဲ့ အကိုဆေးကျောင်းတက်တုန်းက သူအလေးစားဆုံး ဆရာမတ တယောက်။ သူ့ညီလက်ထပ်ပွဲမှာတွေ့တော့ သူ့အဖေသမားတော် ကြီးက သားအရွယ် ဦး ကို လက်ကိုင်ပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ခင်ဗျားတို့ပဲလုပ်ကြပါလို့ ပြောရှာတယ်။ next generation ကိုအားကိုးတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင် တဲ့စိတ်က ထင်ပေါ်တယ်။ I was touched။ အဖေက အိန္ဒြယ သွေးပါတယ်။ အမေကဗမာပဲ။
ဒီလိုတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့မိသားစုကို မြန်မာပြည်သား အပြင် မျိုးချစ်မိသားစု လို့ပဲမြင်ရမယ်။ တခြားမြင်စရာမရှိ။ ဦးရဲ့ value system အရ ဦး အတွက် ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်။
ဦးမိတ်ဆွေရဲ့ ကာစင်ကလည်း Phd ရတယ်။ ဦးမိတ်ဆွေနဲ့ အတူတူ တချိန်ထဲ ကျောင်းမှာ တွေ့ကြတာပဲ။ လူကောင်းပါပဲ။ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်မှာ အနေကြာတော့ assimilate ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်စိတ် ၀င်သွားတယ်။ သူ့ကာစင်လို မွေးရပ် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ချစ်ရမယ် ဆိုတာကို သတိရှိပုံမပေါ်ဖူး။
နောက်ဆုံးတော့ Individually ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကို ဘယ်လို Identify လုပ်သလဲဆိုတာ အပေါ်မူတည်တာပဲ။ No one is right or wrong. It is just how you define or accept yourself. လူတိုင်း သူ့နည်းနဲ့သူ contribute လုပ်နေတာနေကြတာ ပါပဲ။
ဒါကြောင့် တူမောင်က (I amaChinese guy but I have full of Burmese identity (self-styled myself, perhaps)) ဆိုလာတော့ ဦးက သာဓု ခေါ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပထ၀ီအနေအထားအရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ အများဆုံး သန်း၁၃၃၉ ရှိတဲ့ တရုတ်ပြည် နဲ့ ဒုတိယ အိနြိယ လိုသန်း ၁၁၇၀ ရှိတဲ့ လူမျိုးကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာ ညပ်နေတဲ့ သန်း ၅၃ ကျော်ကျော် သာရှိတဲ့နိုင်ငံငယ် ကလေး။ ယူနန်ပြည်နယ်တောင် သန်း ၇၀ ကျော်တယ်။ ဒါကြောင့် တိ်ုင်းပြည်နဲ့ လူုမျိုးမပျောက်ဖို့ သိပ်သတိရှိရပါမယ်။ ဒီကြားထဲ ဘင်္ကာလီကုလား တစုက ရခိုင်မြေကို လာခိုး ချင်သေး တယ်။ ဗမာ့သတ္တိကမ္ဘာကသိအောင် ပါးရိုက်ပြလိုက်ချင်သေးတယ်။
ရာဇ၀င် ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းက ရာဇ၀င်ကိုလေ့လာရတာ (မ အ) ရအောင်တဲ့။ ရောမသားဖြစ်ချင်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီ ရောမ ရာဇ၀င်လေးတော့အရင် ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ Freedom ကိုခံစားနိုင်ဖို့ Revolution War ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့ စစ်ပွဲများစွာ မှာ အမေရိကန် မျိုးချစ် ပေါင်းများစွာ အသက်ပေးခဲ့ကြရရှာတာပါ။ တိုးတက်တဲ့ Industrialized နိုင်ငံဖြစ်အောင်၊ Super Power ဖြစ်အောင် လည်း Native born အမေရိကန်ပေါင်းများစွာ က တွန်းတင်ခဲ့ကြရတာပါ။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ မျိုးချစ် Nationalist တွေရှိပေလို့ပဲ။
စိတ်မကောင်း စရာက သူများနိုင်ငံကို လေထီးနဲ့ ခုံချလာပြီး မှ ၀င်ကစွပ် တွေက ဇိမ်လာယူကြပြီး ပင်ရင်း နိုင်ငံသားတွေထက် လာ အာကျယ် နေကြတာပဲ။
အသက်ပေးသွားတဲ့ မျိုးချစ်တွေ များမြင်ကြရရင် (ထွီ) ဆိုပြီး နာကြည်းလိုက်ကြမဲ့ဖြစ်ချင်း
ဒီမျိုးချစ်တွေသာ မရှိခဲ့ရင်လည်း အမေရိကန်တွေ ဘယ်လွပ်လပ် တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါ့မလဲ။ God Saves the Queen အော်နေရမလား၊ ဟိုင်း ဟစ်တလာ အော်နေရမလား မသိဖူး။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 13:27
တောကဂွက်ထော်က လွင်ငြိမ်းချမ်းကျော်ကို ပြန်ရှင်းပြ...